Vao vita ny fanadinana teny Ivato : mpanala Bacc valo nosamborin’ny zandary fa hoe tsy nahaloa “écolage” | NewsMada
Vao vita ny fanadinana teny Ivato : mpanala Bacc valo nosamborin’ny zandary fa hoe tsy nahaloa “écolage”
Raikitra ny gidragidra manoloana ny vavahadin’ny ivontoeram-panadinana iray eny Ivato Seranana, omaly hariva taorian’ny fahavitan’ny bakalorea. Mpanala fanadinana miisa valo no indray noraofin’ny zandary sy ny talen-tsekoly tsy miankina iray eny an-toerana, omaly hariva.
Mpianatra ao amin’ny sekoly tsy miankina iray ao Ivato Seranana ireto nosamborin’ny zandary ireto. Tsy nahaloa saram-pianarana tamin’ny volana farany teo ireto mpianatra miisa valo ireto ka izay no anton’ny fisamborana, araka ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray omaly teny Ivato. Efa nandrasan’ny zandary sy ny talen’ilay sekoly tsy miankina teo ivelan’ny vavahadin’ny ivontoeram-panadinana nanaovan’izy ireo fanadinana izy valo lahy. Nosamborina avy hatrany izy ireo vao nivoaka ny vavahady ary nentin’ny zandary.
Voalaza fa tsy nomen’ilay talen-tsekoly mihitsy ny taratasy fiantsoana (convocation) raha tsy voaloa ny saram-pianarana. Tsy voaloa hatramin’ny fotoana tokony handoavana azy anefa ny izany, saingy afaka nanao fanadinana ihany ireo ankizy ireo rehefa nomen’ny sampandraharaha misahana ny bakalorea eny Ankatso ny “duplicata” ny taratasy fiantsoana. Tsy nisy olana, araka izany, fa vita soa aman-tsara ny fanadinana. Tsy namelan’ilay talen-tsekoly kosa fa notakiny hatrany ny saram-pianarana tamin’ny alalan’ny fampiasana ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Talatamaty.
Tsy tokony hatao sorona ny mpianatra…
Nilaza ilay talen-tsekoly, araka ny fanazavan’ilay loharanom-baovao hatrany, fa fanaovana hosoka tamin’ny fampiasana “duplicata” ny taratasy fiantsoana no antony nisamborana ireto mpianatra ireto, ankoatra ny tsy fandoavana ny volany. Somary nampalahelo ny mponina eny an-toerana ny fomba nisamborana azy ireo satria toy ireny nisambotra mpangalatra ireny, raha ny fitarainan’ireo nahita izany. Nohamafisin’ny zandary kosa fa tsy nisy ny fampiasan-kery fa nentina hampifanatrehana amin’ilay talen-tsekoly ireto mpianatra ireto.
Ho an’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana, lasa sorona hatrany ny tsy fanomezana taratasy fiantsoana ho an’ny mpianatra mpanala fanadinam-panjakana raha tsy voaloa ny saram-pianarana volana farany mialoha ny fanadinana. Na eo aza izany, tsy misy idiran’ny mpianatra velively ny raharaha toy izao fa anjaran’ny ray aman-dreny sy ny talen-tsekoly ny mifanazava fa tsy tokony hiafara amin’ny fisamborana mpianatra toy izao. Tsy tokony hatao sorona ny ankizy. Azo atao ny manao taratasy fifanekena eo amin’ny ray aman-dreny sy ny sekoly.
Ho an’ny sekoly tsy miankina, tsy omen-tsiny izy ireo satria miantoka ny fampandehan-draharaha eo anivon’ny sekoly ny saram-pianaran’ny mpianatra ary mety hisy fiantraikany any amin’ireo mpampianatra karamain’ny sekoly koa izany. Tokony hisy hatrany ny marimaritra iraisana amin’ny raharaha toy izao fa tsy holalaovina hatrany ny hoavin’ny ankizy. Aiza ny fiarovana ny zon’ny ankizy?
Une réponse à "Vao vita ny fanadinana teny Ivato : mpanala Bacc valo nosamborin’ny zandary fa hoe tsy nahaloa “écolage”"
jentilisa 05/08/2016 à 14:27
Ilay ray aman-dreny izany no manao sorona ny fianaran’ny ankizy satria mitetika hoe tsy mandoa intsony sady tsy miverina ao intsony. Samy be fitetika raha ny fijeriko azy